Tababar Ku Salaysan Maamulka Cududa Shaqo Oo La Soo Gabagabeeyay. - Cakaara News
Tababar Ku Salaysan Maamulka Cududa Shaqo Oo La Soo Gabagabeeyay.
Jigjiga (cakaaranews) Talaado, 16 ka, August, 2016. Xafiiska adeega shacabka iyo kobcinta cududa shaqaalaha DDSI oo ka duulaya taabo galinta qorshaha labaad ee koboca iyo isbedelka dhaqaalaha dalka iyo deegaanka ayaa dadaal dheer ugu jira xoojinta awooda fulineed ee cududa shaqo ee DDSI taasi oo qayb ka ah, tiirarka lagu hirgalinayo horumarka deg dega ah ee joogtaysan.
Haddaba xafiiska adeega shacabka iyo horumarinta cududa shaqada aya maanta u soo xidhay tababar in mudo ah u socday gadhwadeenada geedi socodyada maamuulka cududa shaqaalaha xafiisyada heer deegaanka . Waxaana ka soo qayb gashay munaasabadii lagu xidhayay tababarkan wasiirka xafiiska adeega shacabka iyo horumarinta cududa shaqaalaha DDSI marwo Maajida Maxamad Maxamuud.
Waxayna wasiiradu ka warbixisay Ujeedada iyo ahmiyada uu xambaarsanaa tababarka la xidhayo maanta. Waxayn sheegtay in uu ahaa nidaamka xoojinaya hirgalinta qiimaynta darajo siinta shaqada. Wasiirada ayaa tilmaantay in ay tahay in la miisaamo culayska booska shaqada iyada oo dhamaan shaqooyinka lagu cabirayo tab loo xushay, lana fudaydinayo nidaam kharash bixineed oo caddaalad ah, heer dalna midaysan, shaqooyinka isku midka ahna lagu bixinayo kharash isku mid ah, lana xoojiyo cudud shaqaale oo xasiloon. Waxayna wasiiradu ku boorisay xubnahan qaatay tababarkan in ay dadaal dheer iyo fir fircooni la miyaadaan sidii loogu talagalay u hirgaliyaan cilmigan ay barteen mudadii uu socday tababarka.
Dhankooda xubnihii qaatay tababarkan oo la hadlayay warbaahinta deegaanka ayaa sheegay in ay fahan buuxa ka qaateen nidaamkan darajo siinta shaqada kana hirgalinayaan xafiisyadii ay ka socdeen.
Isku soo wad duub oo nidaamkan qiimaynta iyo darajo siinta shaqada oo ah nidaam dalka iyo deegaanada hadda laga hirgalinaya ayaa ah mid qeexaya ujeedada uu leeyahay booska shaqo, natiijada laga sugayo booska, xilalka iyo waajibaadyada ugu waaweyn ee shaqada lagu fulinayo, kartida iyo khibrada ay u baahan tahay gudashada shaqadu, iyo xaalada jewiga shaqo.